यस्ता श्रीमान ! जसले श्रीमती र ५ छोरीलाई भारतमा छोडेर भागे, १२ वर्ष पछि भेटिदा भयो यस्तो बवाल (भिडियो हेर्नुस्) – Dailny NpNews
यस्ता श्रीमान ! जसले श्रीमती र ५ छोरीलाई भारतमा छोडेर भागे, १२ वर्ष पछि भेटिदा भयो यस्तो बवाल (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २८, २०७७ समय: १९:३१:२६
काठमाडौ । घरमा छोराछोरी र श्रीमती छोडेर खुसी खोज्न भन्दै श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि वाहिर जान्छन् । तर श्रीमानले खुसी ल्याउनु त कहाँ हो कहाँ श्रीमान नै उतै हराउँछन् । परिवार र श्रीमतीका लागि पैसा कमाउन भन्दै भारत गएका श्रीमान १२ वर्ष पछि फेला परेका छन् । भारतमा गएका श्रीमान १२ वर्ष सम्म हराए । श्रीमान हराएपछि अरुले उनको श्रीमतीलाई निकै दुख दिए । उनी माथि आरोप लगाइयो । ५ छोरीकी आमालाई उनका श्रीमानले अहिले २ छोरी आफ्ना होइनन् भनेका छन् ।
छोरी मेरा होइनन् भन्ने गरेका श्रीमानले केही गर्लान् भनेर छोरीहरुले आमालाई रातभरी काखमा राखेर बताए । उनका श्रीमान फेला पर्लान् भन्ने लागेको थिएन । तर उनले श्रीमान हराएको कुरा सार्वजनिक गरेपछि १२ वर्ष पछि घर फर्केका छन् । पहिला घरमा हुँदा पनि उनले कहिल्यै सुख दिएनन् । र क्सी खाएर उनी मध्यरातमा घर आउँथे । श्रीमतीलाई दुख दिन्थे अहिले १२ वर्षपछि घर आउँदा पनि उनको बानी सुध्रिएन । दागंको घोराहीकी एक महिला २ महिना अघि मेरा श्रीमान १२ वर्ष देखि हराए भन्दै मिडियामा आएकी थिइन् ।
उनी टोप बहादुर डाँगी नाम गरेका उनी घरवाट हिडेको २५ वर्ष भएको थियो । उनले श्रीमतीलाई पनि लिएर हिडेका थिए । उनले भारतमै ५ सन्तान जन्माए । पम्फा चन्दले श्रीमान हराए भन्दै मिडियामा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनी ५ सन्तान जन्मिएपछि १२ वर्ष अघि भारतवाट हराएका थिए । श्रीमती खोज्दै आइपुगीन् । श्रीमान भने दागंमै फेला परेका छन् । उनले दोस्रो विवाह समेत गरिसकेका छन् । उनका अहिले १० सन्तान छन् । दुई श्रीमतीवाट १० सन्तान जन्माएका उनले जेठो श्रीमतीका दुई सन्तान आफ्ना होइनन् भन्ने दावी गरेका छन् ।
३९० पटक हेरिएको